Geeridii Aabihii, Wixii Sababay Dhimashada Walaalkii Iyo Maalintii Uu Garoonka Ku Suuxay | Laacibnet.net
Geeridii Aabihii, Wixii Sababay Dhimashada Walaalkii Iyo Maalintii Uu Garoonka Ku Suuxay
May 22, 2020 Abdiwahab Ahmed
Xiddiga Chelsea ee N’Golo Kante ayaa laga fasaxay tababarkii Arbacadii si loogu sameeyo baadhitaano caafimaad oo dheeraad ah oo lagaga hubinayo caabuqa Korona, taas oo ka dambaysay markiii ay soo baxday baqasho la xidhiidha xanuunka oo laacibkan ku saabsan.
N’Golo Kante ayaa Arbacadii aan imannin garoonka tababarka oo Salaasadii lagu sawiray isaga oo ciyaartoyda kale kula tababaranaya garoonka Blues ee Cobham, laakiin inyar kaddib ayaa loo ogolaaday inuu ka tago oo uu maalinta xigtana ku qaato shaybaadho.
29 jirkan madaalaha ah ayaa lagu sameeyey baadhitaano dheeraad ah, waxaana natiijooyinkii soo baxay lagu xaqiijiyey in uu badqab ka yahay caabuqa Korona oo uu tababarka kusoo laaban karo,.
N’Golo Kante ayaa tababarkii Khamiistii loo fasaxay oo kala qayb-qaatay ciyaartoyda kale ee Chelsea, iyagoo garoonka ku yimid gaadhi cusub oo qaali ah oo noociisu yahay Mercedes, kaas oo uu ku beddelay baabuurkiisii yaraa ee Mini Cooper-ka ahaa ee uu shanta sannadood watay.
Laacibkan Muslimka ah ee lagu tilmaamo inuu ka mid yahay shaqsiyaadka ugu akhlaaqadda badan garoomada dhexdooda, ayaa waxa illaa yaraantiisii uu kusoo koray nolol murugooyin hadheeyeen, taas oo laga yaabo inuu kaga soo baxay iimaankiisa qawiga ah oo ay ka muuqato inuu samir badan leeyahay.
N’Golo Kante waxa isaga oo 11 jir ah uu goob-joog u ahaa geerida aabbihii, waxaana ugu xigay geeri kale oo naxdin leh oo ku timid walaalkii Niama oo wadne-xanuun u dhintay.
Laba sannadood ka hor ayaa aragagax uu ku dhacay qoyskiisa markii N’Golo Kante oo tababarka ku jira uu dawakhay ee uu dhulka ku dhacay kaddibna koomo galay.
Markii uu tababarka kusoo laabtay Salaasadii, waxa la fahamsan yahay in uu laacibkani qabay walaac ku saabsan badqabkiisa iyo caafimaadkiisa, taasina keentay in loo fasaxo inuu ku laabto gurigiisa oo baadhitaano dheeraad ah oo kale lagu sameeyo.